Sony Inodzokera kuNyika yeReader neiyo Sony DPT-CP1 | MaReaders ese
Iyo kambani yeSony haisiye nyika yeReader, kunyangwe ichokwadi kuti nguva idzodzo dzakasaririra kumashure apo maReaders avakagadzira aive nehukama nechitoro chemabhuku chepamhepo. Munguva yekupedzisira maawa, Sony yakafumura nyowani hombe screen eReader iyo yakanzi Sony DPT-CP1.
Iyi eReader yakafanana zvakanyanya neanonzi mabhuku emadhijitari kwete eReader yakapusa, zvisinei, iyo inopa zvinhu zvakawanda zveReader iyo inopfuura imwechete mushandisi inokoshesa zvakanaka.Iyo Sony DPT-CP1 ine 10,3-inch screen ine resolution ye 1404 × 1872 pixels, yakazara, 272 ppi. Iyo skrini haina kubva kuE-Ink asi kubva kuNetronix kambani. Ichi chishandiso, kusiyana nemamwe maReaders haina Freecale processor asi iyo Marvell IAP 140 quad-core processor ine 16 Gb yekuchengetedza kwemukati. Iyi SoC haiwanikwe mumidziyo mizhinji asi Sony inoona kuti inogona kupa kuzvitonga kumwe chete kwemwedzi nemimwe michina, asi zvakare, uchishandisa bluetooth, NFC uye Wifi. Hongu, iyi Sony DPT-CP1 ine NFC yekubatanidza iyo inokutendera iwe kubatanidza eReader nezvimwe zvishandiso zvakaita sematauri, mahedhifoni uye kunyange kuburitsa mari kuburikidza nebhuku rekunyorera.
Chiratidziro chichaenderana nechinyoreso kana peni yedhijitari inouya nechishandiso, kuti tikwanise kutora zvinyorwa kana kusimbisa kuverenga uye chengeta icho mudziyo.
Iyo Sony DPT-CP1 chishandiso icho inosvika kuJapan mukati memwedzi waJune pamutengo wemadhora mazana matanhatu nemakumi mashanu, ingangoita mazana mashanu nemakumi mashanu nemashanu euros pakutsinhana. Mutengo wepamusoro weeReader asi pamwe imwe yemitengo yakaderera pamusika wemabhuku emadhijitari uye kunyange kukwikwidzana nemamwe mapiritsi ekumusoro-soro.
Sony yakagadzira iyo DPT nhevedzano yenzvimbo dzebhizinesi, saka izvi zvishandiso zvinotarisa pane chinyoreso uye kwete pakupa raibhurari yepamhepo. Nekudaro, mutengo unonakidza uye zvakare unomiririra kugadzirisa pamusoro peiyo vhezheni vhezheni, iyo yaidhura, iine resolution shoma uye kugona. Hatisati taziva zvikamu zvichazotengeswa neiyi Sony DPT-CP1 asi chimwe chinhu chinondiudza kuti kuchave mashoma Unofungei? Iwe unofungei nezve iyi nyowani eReader? Sei ungatenga mudziyo wakadai?
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Sony » Sony inodzokera kune iyo nyika yeReader neiyo Sony DPT-CP1
Chinhu chimwe ... nei ndikaenda ndakananga kuTodoereaders.com ini handisi kuona chinyorwa ichi futi? Ini ndaifanira kupinda kuburikidza neiyo Twitter link. Haisi nguva yekutanga kuitika kwandiri. Handiwani.
Nezve iye anoverenga, izvi zvinoreva kuti ndinoona ichifadza kune imwe niche. Semuenzaniso, kune vadzidzi kana vanhu vanoda kuverenga .pdf mune chishandiso chinotakurika kupfuura 13,3 ″. Ini ndinofunga kuti mune idzi 10,3 type mhando iyi yemafaira inofanirwawo kuve yakadzikama. Ini pachangu, ndagara ndichifunga kuti ruvara ruchange rwakakosha zvakanyanya kune urwu rudzi rwechidzitiro asi ini ndave kutanga kurasikirwa netarisiro yezuva rimwechete ndichiona inoratidzira color screen uye nezvimwe sezvo runyerekupe rwuchiratidza kuti Liquavista yave kuda kuvhara. Clearink kuruboshwe… rimwe ramakore aya.
Zvinyorwa zviviri nezvemunhu anoverenga, imwe ndeyekuti semukoma wake mukuru zvinongoshanda chete kune .pdf, zvinoita sekunge kudzoka kukuru. Kune rimwe divi, uyu muverengi anorema chete magiramu 240. Zvinotaridza kwandiri kunge zvakapfuura, chingangoita chishamiso, huremu hwakaderera mumudziyo unopfuura gumi ″.
Ini pachangu, iyo 10,3 ″ inoverenga inondikwezva zvakanyanya iOnyx Book Cherechedzo… yakaipa kwazvo haina mwenje kana SD kuverenga. Dai ndaiva navo ndaifunga zvakanyanya nezve kutenga kwako.
Ini ndinoshamisika kana Amazon naKobo vane muverengi weiyi saizi mupfungwa ...
Isu tapedza mwaka tichiratidza zvinyorwa pa / blog panzvimbo pepeji repamba. Ndosaka iwe usina kuvaona, kunyangwe ivo vakaramba vachionekwa mune zvekudya uye pasocial network. Iye zvino adzoka semazuva ese.
Tiri kuyedza chirongwa ichi. 🙂
Notebook uye muverengi akadaro
Ndiri kufarira muverengi mukuru, ini handifarire kana isina micro sd yekuwedzera nzvimbo, kana zvirinani kuti usb chiteshi iOTG, ndiko kuti, kuti igone kubata inobviswa yechipiri memory, ini handizive kana iwe inogona kusimbisa kana chishandiso ichi chinotsigira kubatana kweyekuyeuka kweUSB kuburikidza neUSB port uye inokwanisa kubata mafaera. Chimwe chikanganiso chakakomba mumaonero angu ndechekuti bhatiri harigone kuchinjika nemushandisi, rinotungamira mukusakara kwakarongedzwa uye kusava nechokwadi kana mudziyo wacho usina simba chairo, handisi kuzoshandisa mari shomashoma aya makitsi asina izvi maficha. Kugona kuva nazvo, ndinoona zvisinga gamuchirwe kuti vanogovana navo.
Pindura Notebook uye Reader
Notebook uye muverengi sekuziva kwangu hapana muverengi ane yakadaro usb chiteshi. Ndinodzokorora: sekuziva kwangu.
Ehe, ini ndoziva kune hombe screen vanoverenga vane microsd kadhi kuverenga. Semuenzaniso Onyx yakazivisa iyo 9,7 ″ Book Note S ine 16 gb + sd muverengi kusvika 32 gb. Ehezve, haisati yasvika pamusika (kana kuzivikanwa kuti riini, kunyangwe gore rino iri rechokwadi) kana mutengo.
Ipapo iwe unayo iyo Onyx Boox Max pane iyo 13,3 ″ skrini. Iyo ine 16 gb + sd kusvika 32. Chenjera, iyi modhi ndiyo kubva gore rapfuura. Mhando yegore rino ine 32GB yekuyeuka asi isina muverengi wekadhi. Iwe unayo mumazon https://www.amazon.es/dp/0285175270?hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=ll1&tag=readers0-21&linkId=e15f36231b089456bfb6f08d07b3a658&language=es_ES&ref_=as_li_ss_tl uye mune chimwe chitoro.
Ini ndinofunga pane imwe modhi yeanodya pane iyo 10-inch skrini kana zvimwe ine SD muverengi ... asi kwete akawanda zvimwe, icho ichokwadi.
Iniwo ndakadongorera kunze nguva nenguva ndisina kuona zvinhu zvitsva; ndatenda nekukuita kuti uoneke zvakare.
Nezve Sony, ndinofara kuti iri kudzokera kumusika uyu, ndakave nevaverengi vaviri veichi chiratidzo, PRS-505 uye PRS-T3, vese vachiwana, panguva iyoyo, akanakisa emidziyo midziyo iyo yakandipa maawa ekuverenga kwakanyanya .
Kunyange zvakadaro, michina iyi yaunotiratidza, ndinofungidzira kuti ndechimwewo chinhu, chiri pachena chakanangana nechimwe chikamu chemusika: Bhuku rekunyora iro rinotarisirawo PDF.
Vepamusoro 6 Vaverengi vePDF Vanowanikwa Nhasi